Indlu yaselwandle (eCosmos beach) - I-Airbnb
Indlu yaselwandle (eCosmos beach)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguHostlab
Imiswe kwicala elingahlali bantu kangako eCorfu e Agios Georgios beach (St. George North) kunye nemibono emangalisayo ye-bay, imizuzwana ukusuka ekuqubheni kuLwandle lwe-Ionian olucwebezelayo kwaye luxhaswa ziinduli zomtshayelo kunye nemyrtle.
Indlu ilala i-6 enamagumbi okulala ama-3 kunye namagumbi okuhlambela ayi-3, kwaye yindawo ethandekayo yokuphumla kulo lonke usapho. Ngamagumbi esicwangciso esiphangaleleyo nesivulekileyo, iifestile ezinesisa kunye nomgangatho wamatye, le ndlu yindawo epholileyo kubushushu basehlotyeni. Nangona kuthe cwaka kwaye kuzolile kukho imisebenzi yokuhamba ngesikhephe kunye nezinto eziluncedo kwimizuzu embalwa yokuhamba, ngoko ke imoto ayibalulekanga kwabo bafuna amava acocekileyo olwandle. Ngexesha lasehlotyeni ungarenta isikhephe kwaye ujonge iindawo eziphambili zebhayi zamawa aphakamileyo afihla amacove anesanti kunye nolwalwa.
Amagumbi okulala amabini aphindwe kabini (iibhedi zomtshato zobukhulu bokumkanikazi) ezinomgangatho wamaplanga phezulu onebalcony ene-pergola enomthunzi ejonge ulwandle kwaye inika iimbono ezimangalisayo zebhayi, nganye inegumbi lokuhlambela. Iziqwenga zefenitshala ye-antique zidibaniswa nefenitshala encinci yanamhlanje kwaye inika umhombiso ophumlayo. Igumbi lokulala eliwele phantsi elinomgangatho wamatye kunye negumbi lokuhlambela lakho.
Igumbi lokuhlambela eli-2 phezulu, igumbi lokuhlambela eli-1 elinebhafu yokuhlambela kunye neshawari, e-1 eneshawari kuphela. Igumbi lokuhlambela elisezantsi eline-suite enebhafu yokuhlambela kunye neshawari.
Isicwangciso esikhulu kakhulu esivulekileyo esinekhitshi eligcweleyo. Umatshini wokuhlamba, ifriji/isikhenkcezisi, iwasha yezitya, isitovu, iketile yombane, itoaster, ibhoyila neayini, izixhobo zasekhitshini kunye nayo nantoni na anokuyidinga ukuze alungiselele ukutya kwaye onwabele incasa yeemveliso zasekuhlaleni!
Isicwangciso esivulekileyo esivulekileyo kwigumbi lokuhlala / indawo yokutyela evula ngeengcango ezi-3 zaseFransi kwiveranda ebanzi enombono weAgios Georgios Bay kunye nolwandle. Iincasa zaseAfrika ezinefanitshala eyenziwe ngesandla yase-Ethiopia, iisofa zebhentshi yaseKenya yeKikoi kunye nezinto zakudala. indawo yomlilo yeAdobe; umgangatho ogangathiweyo ngamatye kuyo yonke indawo kunye nefeni yesilingi kwigumbi lokuhlala.
Ilele kude iikhilomitha ezininzi ezantsi kwendlela ejijekileyo kunye neekhilomitha ezingama-30 ukusuka kwidolophu yaseCorfu, le ndawo incinci yokuchithela iiholide inokufunyanwa phantsi kwamagama aliqela kubandakanya iAgios Georgios (eMantla), iAgios Georgios Pagi, okanye iSan George, kwaye yindawo yokuphumla kubathandi bokuphumla okuzolileyo. iholide. Ukuza kuthi ga ngoku iimfuno zorhwebo lwabakhenkethi azikhange bonakalise ubuhle bemvelo beli theku limnandi okanye nobuhlobo babantu basekuhlaleni. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kukho enye iholide yeholide yaseCorfu enegama elifanayo kumazantsi esiqithi.
Ibekwe kumhlaba othe tyaba kumlomo wentlambo ebanzi phakathi kweendawo ezinamatye aphezulu, le ngqokelela yezindlu zabucala, iihotele ezincinci, ii-tavernas kunye namanye amagumbi athe tyaba ngokonqena ngasemva kwendlela yolwandle. Awuyi kufumana naziphi na iibhloko ezinde zezindlu okanye iindawo ezinkulu zokuzenzela ukutya apha, amashishini amancinci osapho aqhuba amashishini.
Emva kwazo kukho amasimi, imithi yeminquma neenduli ezinemithi. Imithi yomnquma yamandulo eneziqu zayo eziphothiweyo nezinemingxuma yenza ikhaphethi eluhlaza greyi xa ijongwe kude, kodwa iimbono zenziwe zibe nomdla kakhulu ngemibala eluhlaza eluhlaza yemithi emininzi emide, emile okwepensile yomsipres.
Ngokuqinisekileyo ayaziwa ngobomi basebusuku obunamandla, i-Agios Georgios ifanelana neentsapho ezinabantwana abancinci, okanye izibini kunye nabantu abakubudala bonke abonwabela iiholide eziphumlileyo kumaphandle amahle, ngelixa kwangaxeshanye bebonelela ngolonwabo olungapheliyo kubantwana elunxwemeni okanye malunga namachibi ehotele.
Nangona kunjalo kubantu abacinezelekileyo 'abasebenza nzima' le yeyona ndawo ifanelekileyo njengoko ungenako ukukhetha ngaphandle kokuthoba isantya. Yonke into ihamba kancinci apha. Kubomi bobusuku obudlamkileyo kulula ukukhwela iteksi okanye imoto umgama oziikhilomitha ezili-12 ukuya eSidari.
Kulwandle oluhle kakhulu olunamanzi acwengileyo angaphumla kwaye wonwabe nelanga phantsi kweambrela yaselwandle, uqeshe isikhephe okanye ukonwabele imidlalo eyahlukeneyo yamanzi.
Kukho ukhetho olwaneleyo lweeTavernas ezinobuhlobo, iindawo zokutyela, iimarike ezincinci ezincinci kunye neeVenkile zeZizipho ezimbalwa kunye neevenkile ezincinci ezisemgangathweni. Zonke ziqhutywa ngabantu basekuhlaleni abanobuhlobo.
Ungaqesha iMotor Bike okanye i-Scooter yosuku, okanye iMountain Bike (izinduli okanye uzame imidlalo yamanzi ekhoyo elunxwemeni. Iindwendwe ezininzi ziyakonwabela ukuhamba kula mmandla wasemaphandleni umnandi unamathafa kunye nemithi yomnquma enomthunzi kunye neentyatyambo zasendle ezisemdeni weendlela zasemaphandleni. .
Umbuki zindwendwe ngu- Hostlab
•Inkonzo yokungena/yokuziqhelanisa ngumntu esimkhethileyo (ukusuka ngo-16h00 ukuya ku-23h00)
•Wamkelekile iHamper ngeemveliso zeCorfiot ezisuka ngqo kubavelisi basekuhlaleni “abaluhlaza”
•Inkonzo yesicaka kunye nokutshintsha ilinen kabini ngeveki
•Inkonzo yodluliselo (ibhukishwe kwangaphambili, ngokwesicelo)
•Wamkelekile iHamper ngeemveliso zeCorfiot ezisuka ngqo kubavelisi basekuhlaleni “…
Inombolo yomthetho: 0829K10000264101
Iilwimi: English, Français, Ελληνικά, Italiano
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Corfu